भुम्लु गाउँपालिका छिर्न अनिवार्य स्वास्थ्य परिक्षण गर्नु पर्ने – Radio Roshi
भुम्लु गाउँपालिका छिर्न अनिवार्य स्वास्थ्य परिक्षण गर्नु पर्ने
in रोशी खबर / स्थानीय तह / स्वास्थ्य — by Roshikhabar —	March 22, 2020
जिल्लाको कोशिपारिमा रहेको भुम्लु गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिका छिर्ने मुख्य नाका वडा नं. ८ को दोलालघाट कोसिपारी बसपार्कमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ । गाउँपालिमा छिर्न चाहानेले स्वास्थ्य परिक्षण गरेर मात्रै प्रवेश गराउने निर्णय पालिकाको उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठ जानकारी दिईन । कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) रोगको परिक्षणको लागि पालिकाले भने पालिकाको मुख्य आवतजावत केन्द्रहरुमा हेल्थ डेक्स संचालन गर्ने बताईन् । गाउँपालिका उपाध्यक्षका अनुसार बाहिरी देशको तथ्यांक हेर्दा कोरोना छिटोभन्दा छिटो सर्ने रोग भएकोले यसको रोकथाम तिर विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताईन । भुम्लु गाउपालिकाले आफ्नो नाकाभित्र कोरना भाइरसको प्रभाव नियन्त्रण गर्न वडा नं. ८ को दोलालघाट कोसिपारी बसपार्कमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरि स्वास्थ जाँच सुरु गरेको छ ।